Izixeko ezithandathu kwezilishumi zehlabathi ezinokufuduselwa kuzo zise-USA
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba ezahlukeneyo » Izixeko ezithandathu kwezilishumi zehlabathi ezinokufuduselwa kuzo zise-USA
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Culinary • inkcubeko • Education • ukonwatyiswa • Iindaba zefashoni • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Shopping • Sports • News Sustainability • Technology • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Izixeko ezithandathu kwezilishumi zehlabathi ezinokufuduselwa kuzo zise-USA.
Uphononongo luhlalutye izinto ezihlala zithathelwa ingqalelo xa kusenziwa isigqibo sokufudukela kuyo, kubandakanywa namaxabiso ezindlu, iindleko zokuhlala, umvuzo ophakathi, iimeko zemozulu, inani leendawo zokutyela kunye neendawo eziluhlaza, isantya se-intanethi kunye nexesha lokuphila.
Eyona ndawo ifikelelekayo yokufudukela e-Istanbul, eTurkey apho umndilili weendleko zokuhlala ngonyaka zii-$17,124 kuphela.
I-Basel, iSwitzerland sesona sixeko sibiza kakhulu ukufudukela kuso njengoko iindleko zokuphila zonyaka zingama-72,169 eerandi.
IDubai yeyona ndawo ilungileyo yokufudukela ukuba ujonge ukuya kwimozulu engcono, njengoko ifumene amanqaku ali-10.
Uphando olutsha luye iveze ezona ndawo zingcono zehlabathi zokufudukela kuzo, kwaye izixeko ezithandathu zase-USA zikwindawo ezili-10 eziphezulu.
Austin, Texas kuthiwa inombolo enye indawo ukufudukela, kunye Charleston kunye los Angeles ukwabeka abahlanu abaphezulu.
Iindawo ezili-10 eziphezulu zokufudukela kwihlabathi
Uhlu isixeko Iqondo lobushushu eliphakathi (°C) Umndilili wexabiso lendlu ngem2 nganye Umyinge wemivuzo yenyanga Iindleko zokuphila ngenyanga (usapho lwabane) Inani leendawo zokutyela Inani lezithuba eziluhlaza Isantya seIntanethi (Mbps) Izinto ozilindile emhlabane Inqaku / 10
1 IAustin, eUSA 20.4 $4,043 $5,501 $3,121 3,503 47 87.50 79 6.02
5 ELos Angeles, eU.SA 17.6 $7,396 $5,351 $3,839 10,575 47 74.00 79 5.60
7 Miami, e-USA 24.6 $4,119 $3,777 $3,887 809 38 72.00 79 5.47
9 ISan Francisco, e-USA 13.5 $11,943 $7,672 $4,542 4,937 57 96.50 79 5.38
10 ILas Vegas, eUSA 20.3 $2,550 $3,631 $3,137 4,524 16 20.00 79 5.36
Esona sixeko silungileyo ehlabathini ukufudukela kuso Austin, TX, USA. I-Austin ineyesithathu-yeyona isantya se-intanethi yaso nasiphi na isixeko esikuluhlu, kwi-87.5 Mbps. Ukongeza, isixeko sifumana amanqaku aphezulu ngokomndilili wobushushu (20.4 ° C), kunye nemivuzo ephezulu yenyanga kwi-5,350 yeedola.
Ukuba ucinga ngokufuduka ngaphandle kwe-USA, isixeko sesibini esiphezulu samanqaku si tokyo eJapan. ITokyo ifumana amanqaku kakuhle ngenani leendawo zokutyela kunye neendawo eziluhlaza. Ngaphezulu koku, inowona mndilili weminyaka yokuphila, kunye nabahlali abahlala kuma-84.
ICharleston, eSouth Carolina sesona sixeko sikhulu sesithathu ukufudukela kwihlabathi. Enye into egqithileyo kuyo sisantya se-intanethi, umndilili yi-106.5 Mbps, nto leyo ethetha ukuba yeyona ikhawulezayo kuso nasiphi na isixeko kuluhlu.
Ngaphandle kokuba ibizwa ngokuba yeyona ndawo ye-9 yokufudukela kuyo, iSan Francisco yaphinda yafunyanwa njengeyona dolophu ibiza kakhulu ukufudukela kwihlabathi, ilandela iNew York kwindawo yesi-6. Iindleko zonyaka zokuhlala eSan Francisco yi-5 yeedola, ngelixa iindleko zokuhlala eNew York zingama-54,499 eerandi.
Ukuba ukufuduka elunxwemeni kungaphezulu kwe-vibe yakho, i-Daytona Beach yeyona ndawo ilungileyo yokufudukela e-USA kunye ne-6th yeyona ndawo ilungileyo yokuhamba emhlabeni, ilandelwa ngokusondeleyo yiMiami.
I-Basel, iSwitzerland sesona sixeko sibiza kakhulu ukufudukela kuso njengoko iindleko zokuphila zonyaka zingama-72,169 eerandi, engaphezulu kwe-33,568 yeedola ngonyaka kuneendleko zokuhlala zonyaka ezingama-38,558.
Eyona ndawo ifikelelekayo yokufudukela e-Istanbul apho iindleko zomndilili zokuhlala ngonyaka zi-$17,124 kuphela. Le yi-$ 55,045 ngaphantsi ngonyaka kunokufudukela e-Basel, kunye ne-$ 21,434 ngaphantsi komyinge.
I-Dubai yeyona ndawo yokufudukela ukuba ujonge ukuya kwimozulu engcono, njengoko ifumene i-10 egqibeleleyo. Ubushushu obuqhelekileyo eDubai yi-28.2 degrees Celsius, kwaye kukho i-68mm yemvula ngonyaka.
Isixeko saseQatari saseDoha yeyona ndawo iphezulu yokufuduka eselunxwemeni, esi sixeko safumana amanqaku angama-7.53/10. Amaqondo obushushu bamanzi e-Doha ngama-24.83 degrees ngokwe-avareji, nayo inomvuzo ophezulu we-55,096 yeedola.
UMichael Roberts uthi:
Novemba 17, 2021 kwi-01: 10
Andiqinisekanga ukuba ngubani owenze olu phando, kodwa kumava am njengomphambukeli waseOstreliya owayehlala phesheya kolwandle iminyaka eliqela bubudenge obupheleleyo, kunye nokungqubana nalo lonke olunye uphando endilubonileyo ngesihloko! Ngokucacileyo abaphandi abazange bazikhathaze nge-SE Asia, e-Australia okanye eNew Zealand.